उद्यम « Clickmandu
श्रमिक तथा कर्मचारीलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउनुः
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारीलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउन उद्योग-प्रतिष्ठानलाई आग्रह गरेको छ । महासंघले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उद्योग-प्रतिष्ठानमा काम
चैत मसान्तसम्म थपिए २३२ उद्योग
काठमाडौं । चालू आवको चैत मसान्तसम्म २३२ उद्योग दर्ता भएका छन् । गत आवको सोही अवधिमा १६९ स्वदेशी तथा विदेशी उद्योग दर्ता भएका थिए । हालसम्म आठ हजार ६८७ उद्योग
परिसंघको महानिर्देशकमा जोशी नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघको महानिर्देशकमा दीपक राज जोशी नियुक्त भएका छन् । परिसंघ पदाधिकारी समितिको २७ औँ बैठकको निर्णयअनुसार जोशीलाई महानिर्देशक नियुक्त गरिएको बताइएको छ । परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार
‘विद्युत आपूर्ति नहुँदा उद्योग चलाउनै नसक्ने, मंगलबारसम्म समाधान नभए आन्दोलन’
काठमाडौं । बिना जानकारी विद्युत आपूर्तिमा अवरोध हुँदा उद्योग करकारखाना चलाउनै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उद्योगी व्यवसायीहरुले बताएका छन् । मोरंग व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ
मन्त्री बडू र बंलगादेशका राजदुतबीच व्यापार सम्झौता अगाडी बढाउन छलफल, कर घटाउने
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र नेपालका लागि बंगलादेशका राजदूत सलाहुद्धीन नोमन चौधरीबीच व्यापार सम्झौता अगाडी बढाउने विषयमा छलफल भएको छ । सन् २०२० देखि नेपाल
विदेशी मुद्रा भित्र्याउने नेपाली ब्राण्ड ‘गोल्ड स्टार’, पारिवारिक बिजनेशलाई विदुषीले फैलाउँदैछिन् विश्वभर
काठमाडौं । विदेशमा नेपाली उत्पादन भनेर चिनिने ब्राण्ड कति होलान् ? सियो समेत नेपालमा बन्दैन भनेर पढ्दै आएका हामीलाई विदेशमा पहिचान दिलाउने ब्राण्डको संख्या सीमित छ । सबैले चिन्ने भनेको
घरेलु तथा साना उद्योगीको मन्त्री बडुलाई गुनासोः बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा भेदभाव गरे
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद वडुले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरू मुलुकको मूल अर्थको आधार र आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार भएको बताएका छन् । नेपाल घरेलु
समस्याको पोको बोकर उद्योग मन्त्रालय पुग्यो सिएनआइ, आर्थिक मुद्दामा सबै एक हुनुपर्छः मन्त्री बडु
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले विद्यमान आर्थिक समस्या समाधानका लागि गम्भीर पहल गर्न नवनियुक्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुसमक्ष आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रले गम्भीर समस्याको
कोरोनाका कारण रोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी आगामी जेठमा
काठमाडौं । आगामी जेठ १९ देखि २३ गतेसम्म “नेपाल १६ औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव–२०७९’ आयोजना हुने भएको छ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले
भारत गएर लगानी अभिवृद्धि, सहज विद्युत व्यापार र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न पहल गर्छु: राजदूत शर्मा
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालमा लगानी अभिवृद्धि, दुई देशबीच सहज विद्युत व्यापार, पर्यटन प्रवद्र्धन र व्यापार घाटा न्यूनीकरणका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम अघि बढाउन भारतका लागि नवनियुक्त राजदूत डा शंकरप्रसाद
आज स्थानीय तह निर्वाचन, १ करोड ७७ लाख मतदाताले जनप्रतिनिधि छान्दै
अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या र समाधानका उपाय, वास्तविक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखौं
राति साढे ११ बजेसम्म बालेनलाई स्थापितभन्दा २२४१ बढी मत, कुन वडाबाट कति ?
मिस इण्डियासँग विहे गरेका सुरज बैद्यको प्रेमकथा: विवाहका लागि धर्म परिवर्तन, पट्याउन झुटको खेती
चन्द्र ढकालको दूरदर्शी भिजनले ग्लोबल आइएमई यसरी बन्यो देशकै ठूलो बैंक
५० हजारलाई रोजगारी दिएको फुटवेयर उद्योगः ७० प्रतिशत भारतीय श्रमिक, नेपाली टिकाउनै गाह्रो